गजलमा श्रमिकगृहपृष्ठगजलमा श्रमिकश्रमिकको पक्षमा नेपाली गजल कपिल अन्जानशनिबार, असोज २४, २०७७ 265Shares
कपिल अन्जानशनिबार, असोज २४, २०७७
इजलासमामलाई मेरै कविताहरूमाथि हात राखेर कसम खुवाइयोस् ।
श्रीमान् चुप लाग्नु भनेको सहनु हुँदै होइन यहाँ बिना बहस च्यातिदिएका छन् मैले राता अक्षरमा लेखेका मेरा राता कविताहरू । यदि, रातोको विषयमा नबोल्ने हो भने किन रातो हुन्छ सूर्य ? किन रातो हुन्छ रगत ? किन रातै बनाइयो झण्डा ? सम्झना छ मेरो आङ ढाक्ने च्यात्तिएको भोटो सँगै मैले देखेको मेरो बालक सपना त्यो पनि त रातै थियो । हिँड्ने बेलामा बैनीले मेरो निधारमा टाँसिदिएकी थिइन्– रातो कनिका । मैले अझै बिर्सिएको छैन मेरी आमाको सिउँदो पनि त रातै थियो । श्रीमान् किन सबै राताहरू नै बढी खतरा हुन्छन् ? –आगो –फूल –सिन्दूर –हस्ताक्षर – र लाजपुर्जा । श्रीमान् मेरो यो बयान सेतोको समर्थनमा भने हुँदै होइन यो रङ्गिन इजलासमा बहस गरियोस्
किन सादा छ ? मेरी आमाको अनुहार सगरमाथाको रङ यी मान्छेहरूको मन र, मेरो देश ।
–कपिल अञ्जान कोहलपुर, बाँके
गजल ll यहाँ भगवानको पनि घर भत्किएको छ
उसले जतिचोटी आफैलाई बिर्सिएको छ त्यति नै चोटी यो देशलाई सम्झिएको छ
सरकार मुर्दालाई कानुन पढाइरहेको छ यस्तो देखेर अपराधी पनि तर्सिएको छ
तिमी फलामको भित्ताले सुरक्षित हुँदैनौं यहाँ भगवानको पनि घर भत्किएको छ
ऊ हतियार बोकेर मैदानमा गएको थियो साथमा दुश्मनलाई ल्याएर फर्किएको छ
© कपिल अन्जान
गजल ll त्यस दिनदेखि उसले हरेकलाई प्यार गर्छ
सरकार महङ्गो वस्तुको मात्रै व्यापार गर्छ यता भोकमरीले भने हाम्रो पेटमा प्रहार गर्छ
कसैबाट यति नराम्रोसँग धोका पाएको हो त्यस दिनदेखि उसले हरेकलाई प्यार गर्छ
पहिला जन्माउँछ आफै, पछि मार्छ आफै यो प्रकृतिले पनि किन यस्तो व्यवहार गर्छ
मानेले पनि घुमाउन सकेन उसको जिन्दगी आजकाल ऊ बली चढ्नलाई हतार गर्छ